Labba taliye 1.0.0 mar hore ayaa la sii daayay waana kuwan isbeddelladeeda | Laga soo bilaabo Linux
Double Commander 1.0.0 mar hore ayaa la sii daayay kuwanuna waa isbeddelladeeda
Dhowr maalmood ka hor waxaa lagu dhawaaqay daah-furka nooca cusub ee beta maamulaha faylka laba-geesoodka ah Laba taliye 1.0.0, kaas oo isku dayaya inuu nuqul ka sameeyo shaqada Total Taliyaha oo uu hubiyo in ay la jaanqaadi karto plugins-keeda.
Astaamaha by Double Commander, waxaa suurtagal ah in la muujiyo fulinta dhammaan hawlgallada gadaasha, taageero in dib loo magacaabo koox faylal ah, interface tab-ku-saleysan, qaab laba-panel ah oo leh meelayn toosan ama toosan dashboards, tifaftir qoraal ah oo ku dhex jira oo muujinaya syntax, la shaqaynta faylalka iyo sidoo kale hagayaasha farsamada, aaladaha raadinta dheeradka ah, dashboard-ka caadiga ah, taageerada Total Commander plugins ee qaababka WCX, WDX iyo WLX, diiwaannada shaqada log.
Tilmaamaha kale taagan:
Tusmooyinka waa la is barbar dhigi karaa oo waa la isla meel dhigi karaa si summetrical ah (laba-gees) iyo si aan toos ahayn (hal-jid).
Laba garab oo isku mid ah
Dabaqyada waxaa lagu koobi karaa hal dhinac ilaa dhinaca kale. Dashboard-yadu waxay meteli karaan hagayaasha asalka ah marka loo eego kuwa la koobiyeeyay ama la taageeray. Kuwaas waxaa lagu barbar dhigi karaa si tafatiran oo ku jira qaabka isku-dhafka hagaha.
Tabaha waxaa loogu talagalay hagaha. Qalabka tabs waxaa lagu kaydin karaa faylal dib loo rari karo si ay u soo saaraan isla labada dhinac iyo tabskooda mid habeeyey oo kaydiyay. Tabs waxa loo habayn karaa si aanay u oggolaan in isbeddelku ku yimaaddo, ama in la furo hage-hoosaadyo tabs cusub, si tabka asalka ahi u ahaado mid sugan oo la heli karo.
Muuqaal gaaban ama buuxa ee faylasha
Sawirada sidoo kale waxaa loo arki karaa thumbnails cabbirrada isticmaale-qeexay
Kala soocista kala duwan
Taageerada zip, 7z, tar, bz2, tbz, gz, tgz, lzma, tlz
Jidadka kiiboodhka la beddeli karo
Qalab magac-beddelid oo badan, kaas oo taageera tibaaxaha caadiga ah
Jiilka hubinta iyo xaqiijinta
Isbarbardhigga faylka / farqiga muuqaalka 
Fiilaha isku dhafan iyo tafatiraha qoraalka 
Habka abuurista, ilaalinta, iyo muujinta faallooyinka faylka
Faylasha si badbaado leh ayaa loo tirtiri karaa
Dhammaan hawlgallada waxaa lagu safayn karaa gadaasha.
Waxay taageertaa Windows Total Commander WCX, WDX iyo WLX plugins 
Tilmaamaha cusub ee ugu muhiimsan ee Double Commander 1.0.0
Iyadoo la siidaayay nooca cusub ee beta bedelida nambarka nooca 1.0.0 waa natiijada gaaritaanka qiimaha ugu badan ee nambarka labaad, kaas oo, marka loo eego macquulnimada nambarada nooca version ee loo adeegsaday mashruuca, u horseeday u gudubka 1.0 ka dib 0.9. Sidii hore, buundada tayada koodbase waxa loo kala saaraa sidii beta.
Marka la eego isbeddellada ugu muhiimsan waxaan ku heli karnaa taas Kobcinta saldhigga code ayaa laga soo guuray Sourceforge una guuray GitHub.
Halka maxaae ee isbeddellada gaarka ah Codsiga waxaan ka heli karnaa taas ku daray hab lagu fuliyo hawlgallada faylka sare (oo leh xuquuqda maamulka).
Nuqul ka mid ah sifooyinka faylka la dheereeyey ayaa sidoo kale la bixiyaa, qalab toosan oo la dhex dhigay baalasha dhexdooda ayaa la hirgeliyey, iyo awoodda si gaar ah loogu habeeyo qaabka cabbirka faylka ee madaxa iyo hoose ee shaashadda ayaa la bixiyay.
Dhinaca kale navigation isku mid ah ayaa lagu daray, kaas oo bixiya isbeddelada hagaha isku midka ah ee labada dhinac, oo lagu daray a shaqo raadinta nuqul ka mid ah lagu daray iyo raadinta faylasha ku dhex yaal faylal kale ayaa sidoo kale la bixiyaa, iyo sidoo kale raadinta qoraalka qaabab dukumeenti xafiiska ku salaysan ee XML.
Wadahadalka wada shaqaynta tusaha, ikhtiyaarka lagu tirtirayo shayada la doortay ayaa lagu daray waxaana la soo bandhigay horumarka saxda ah ee hawlaha faylka.
Taageero lagu daray Zstandard iyo ZST isku xidhka algorithm, faylasha TAR.ZST.
Taageero lagu daray xisaabinta iyo xaqiijinta xashiishyada BLAKE3.
Daawadeha, naqshada guddida waa la bedelay waxaana la hirgeliyay raadinta iyadoo la adeegsanayo tibaaxo joogto ah.
Soo dejinta thumbnail ee faylasha mp3 waa la bixiyay.
Qaab muuqaal fidsan oo lagu daray (arag aan lahayn hage-hoosaadyo), kaas oo u shaqeeya kaliya faylalka iyo hagayaasha la doortay.
Markaad la shaqaynayso kaydinta shabakada, khaladka si fiican u maareeyo iyo kala goynta.
Finalmente hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato ama soo deji utility-ga, waad sameyn kartaa ka soo xiriir khadkan hoose.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Double Commander 1.0.0 mar hore ayaa la sii daayay kuwanuna waa isbeddelladeeda
Android 12 waxay la socotaa horumaro badan iyo warar
Rancher Desktop, GUI loogu talagalay abuurista, socodsiinta, iyo maaraynta weelasha Kubernetes-ku-salaysan